Xitaa Priyanka Chopra waa lagu fara-xumeyn gaaray Bollywood, balse arrintaan oo kale miyey ku qabsatay Hollywood? | Filimside.net
Home » Bollywood News » Xitaa Priyanka Chopra waa lagu fara-xumeyn gaaray Bollywood, balse arrintaan oo kale miyey ku qabsatay Hollywood?
Xitaa Priyanka Chopra waa lagu fara-xumeyn gaaray Bollywood, balse arrintaan oo kale miyey ku qabsatay Hollywood?
Fadeexo kusoo baxday filimsameeyaha caanka ah ee shirkadda Hollywood Harvey Weinstein ayaa keentay in adduunka oo dhan uu kaco isla markaana la baaro dhibaatada loo geysto hablaha doonaya inay shaqo ka helaan shirkadaha aflaanta.
Wixii intaas ka dambeeyey gabdho badan oo caan ah ayaa waxay qirteen in filimsameeyeyaal, filim-agaasimeyaal, maalgeliyeyaal iyo atooreyaal caan ah ay shuruud uga dhigeen inay sariir la wadaagaan si ay shaqo u helaan – Hollywood-ka Mareykanka iyo Bollywood-ka India ayaana ugu weynaa.
Iyadoo aan Bollywood-ka diiradda saareyno isla markaana horay idiinla wadaagnay cabashada dhowr shaqsi. Haatan waxaa liiska kusoo biiray mid ka mid ah atariishooyinka ugu weyn Bollywood iyo Hollywood waana Priyanka Chopra.
Madhu Chopra waa hooyada dhashay Priyanka Chopra, waxayna wareysi siisay warbaahinta India, waxaa la weydiiyey haddii gabadheeda Priyanka Chopra lagu xujeeyey inay howsha sariirta ogolaato si aflaan dakhli badan ay u sameyso.
Madhu ayaa laga soo xigtay: “17 sanno jir ayey aheyd gabadheydu markii ay kusoo biirtay saaxada aflaanta, sidaas darteed daqiiqad walba waan la socday xaaladdeeda illaa muddo seddax sanno ka hor ah. Xitaa goobaha ay aflaanta ku duubeyso ayaan u raaci jiray.
“Sidaas darteed raggu waxay dhihi jireen gabadheyda ‘Hooyadaa miyaa bannaanka fadhisa, waxaan doonayaa inaan kuu sheego sheeko qaas ah’ – Priyanka waxay ku jawaabi jirtay ‘Marba haddii sheekadaas laga qarinayo hooyadeey, taasi ma ahan sheeko aan maqli karo’.”
Madhu oo sheekadeeda sii wadata waxay tiri: “Markale waxaa dhacday, naqshadeeyaha lebiska jillayaasha filimka ayaa wuxuu u sheegay Director-ka filimka in loo baahan yahay inay Priyanka Chopra soo xirato dhar gaaban oo khafiif ah.
“Director-ka ayaa ku yiri ‘Ii sheeg sababta aad dharka gaaban ugu xireyso Miss World ee aad kaamirada usoo hor istaajineyso miyaadan ku qanacsaneyn quruxdeeda dabiiciga ah?
“Priyanka waa ay diiday inay filimkaas sameyso. Xaqiiqadu waxay tahay Priyanka 10 filim ayey sidaas ku lumisay, waana ay isaga bixi jirtay mashruuca. Waxba kama quseyn mashruuca marba haddii ay arrintu baashaal faraha lasoo gasho. Arrintaana waan u sheegaa qof walba. Waxaan ku dhahaa gabadheyda Priyanka, tani ma ahan dhammaadka noloshaada, wax walba noloshaada ayaa kaaga qiimo badan”.
Madhu Chopra ayaa la weydiiyey haddii Priyanka ay xaalad nuucaan oo kale ah wajahday tan iyo markii ay ku biirtay Hollywood-ka, waxayna si degdeg ah ugu jawaabtay: “Ixtiraam badan ayey u muujiyaan Priyanka. Haddii aad tahay qof ku socda waddo toosan, marwalba waad dhibtooneysaa laakiin natiijada kuusoo baxaysa ayaa ah mid macaan.
“Gabar walba waxaan kula talinayaa in aysan jirkeeda shaqo ku iibsan. Sababtoo ah nolosha ayaa ka wanaagsan wax walba”.
Waxaa Aqrisay 4,129